The French aye akha sengqondo ehlukene kakhulu itiye kuka eRussia. Kube isiphuzo abavamile hot ikhofi noma ukhokho. It lwamaSlav wenza "zezinkambi jaha" kathathu ngosuku. Yebo, aphuze Ungadla yabo. Noma nje ukuze ifudumale ...
E-Fulansi, njalo itiye waqhubeka nalo gleam ka gentility. Futhi zonke ngoba ekuqa- namakhulu eminyaka nesishiyagalombili futhi nesishiyagalolunye, enkathini eyiminyaka nothando olukhulu zonke Chinese, ukwazi ukuhlela reception, lapho izivakashi zijabulela isiphuzo kusukela ugqoko elite of the Empire, Celestial. Ngisho kwamanje, France kukhona uhlobo olukhethekile khekhe - Salon de. Uma ubona lesi sibonakaliso, wazi: sikhungo ungakwazi ukujabulela amakhekhe nje kuphela esiphundu kanye nama-dessert, kodwa futhi izinhlobonhlobo elite itiye.
The French safinyelela naleyo esungulwe isihloko olukhethekile sommelier, efana iwayini. Lokhu onguchwepheshe, umuzwa esihle wonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama itiye futhi iyakwazi ukwenza imisindvo, ngokuthi Maitre de. Futhi komculo indlela eyinkimbinkimbi kakhulu izinhlobo elite igama elifanayo baba inkampani. Ngokuhamba kwesikhathi, yaqala ukukhiqiza nezinye "wamakoloni" imikhiqizo: ikhofi, umoba, ujamu. Kodwa umkhiqizo wawo oyinhloko uwukwenza itiye. Maitre de namuhla focus esihlokweni sethu.
A kancane mayelana sha
Ukuze uthole isihloko "Maître de Te", ehola itiye sommelier Paris wazama ukwenza iqoqo amamiksi engcono. Phela, kukhona eyodwa kuphela isitshalo ukuthi usinikeza isiphuzo emangalisayo - Camellia Chinese. Zonke ezihlukahlukene zezinkambi zomhlaba kuncike esifundeni kanye nokukhula ukuphakama emahlathini, indlela eshiya ukuqoqwa futhi kucutshungulwe. Futhi isenzo odlule abadlale indima ebaluleke kunazo zonke. Phela, black, green, ophuzi, futhi ezimhlophe itiye ikhiqizwa amaqabunga efanayo. ekucubunguleni kuphela baye ezahlukene.
Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo ngezinga yokuwela ishidi. itiye Maitre has amaqoqo eziningana. "Noir" - kukhona imisindvo esiyingqayizivele zezinkambi abamnyama. "Vert" - hhayi ngaphansi elite izinhlobo kwakwakhe oluhlaza. Kodwa "Mate" akulona ngempela itiye. Lokhu kushiya Paraguay holly. Kodwa amaNdiya kusukela kudala uye ukwenziwa tonic. Okuqinile "Maitre de Labo" kufakwe kubo limile elikhulu zezinkambi, kuka exoticism wanezela iqoqo yakhe. It iveza imikhiqizo e amathini, noma amakhadibhodi amabhokisi.
Le nkampani idume "Maitre de Te"
E-Fulansi, eziningi izinkampani, okuyinto ukuthenga ezivela emhlabeni wonke, ezihlangene, iphakethe futhi adayise itiye. Maitre de emlandweni walo eside (sha yasungulwa emuva konyaka nesishiyagalombili engamakhulu ninetieth futhi) ephethwe abantu ukuze udume nokubonwa phakathi abalandeli isiphuzo. emaphaketheni design izingoma linesizotha ngisho minimalist - kungemuva elimnyama nge leaf obomvu noma oluhlaza. Kodwa lokhu brand isibe liyabonakala ngaphezulu phakathi emabhokisini engapheli nge izithombe egqamile. Phela, kubalulekile emaphaketheni hhayi agqamile okuqukethwe. Futhi benzani okungcono itiye sommelier Paris, ukudala ukwakheka engcono. Ububanzi kuhlanganisa kokubili imiklamo zakudala kanye izitayela yasekuqaleni. Esikhundleni izithombe amahle, umenzi unika isembozo ukuze umthengi ulwazi oluyigugu. Njengoba yaziwa, ezihlukahlukene zezinkambi zembula ngokugcwele ukunambitheka kwalo ngaphansi imithetho ekhethekile yokuphisa lesi siphuzo. Ngaphezu iziyalezo zendlela ukulungiselela kangcono isiphuzo, sommelier ukucacisa okuyiwona amacala ebangeni elifanele.
Black itiye Maitre
Brand ejabulisa abalandeli lolu hlobo okunezinhlobonhlobo ocebile kakhulu. Ungathenga umkhiqizo tin yasekhaleni + enesisindo esiyingxenye amagremu ayikhulu noma amakhadibhodi ibhokisi - okuqukethwe kuyoba kakhulu ngokulinganayo. Phela, sommelier ekhethelwe "Maitre de Te" kuphela best itiye amahlamvu. Ukuze abalandeli uhlobo olulodwa kuphela, kukhona brand of "Lao Puer", "Diagne Intaba" (umphakeli impahla eluhlaza - China), "iSikhulu Noir", "Golden Leaf" (Sri Lanka), "Kenya" kanye nabanye abaningi. Kodwa kukhona nenye. Ethandwa kakhulu kuba uchungechunge oluthi "yonke China."
Le nkampani yaziwa seqoqo nezithelo Izingxube ngezindleko zemithi engamakhambi. Kodwa kukhona ezinye zezinkambi abamnyama, okuyinto imibala ehlukene noma flavour. "Spring kwemizwelo" livelele mikhiqizo. Ngo itiye elimnyama kusukela Kenya ungeze safflower amacembe, marigold futhi Mallow. A "Oriental Tale" yakhiwa ezimbili izinhlobo - "Assam" futhi "Masala".
itiye Green Maitre
Sijabula uma sithola lolu isiphuzo futhi Ukukhetha olukhulu. Chinese "Ubisi Oolong", "Highland Wee", "Jade neziqhumane itiye", "Ginseng Oolong Tea," "South Fudzyansky oludakisayo" - kuphela ingxenye encane yini efika ngokuqinile ovela eChina. Maitre green tea leaf Ungase futhi aqukethe isithokela futhi elimnandi izithasiselo - jasmine izimbali, lemongrass, Mint, njll imikhiqizo enjalo nazo ekhiqizwa sachets ...
Ongoti abaningi we wokuphuzwayo onjengowasekuseni ezihlukahlukene. Kubo, "Maitre de Te" okulungiselelwe iqoqo elikhulu "Izinhlobonhlobo." Ibhokisi elilodwa kukhona izikhwama eziningana nge izinhlobo ezahlukene itiye - kusukela ezimbili (isibonelo, "Platinum Edishn") ukuze nambili ( "Basket"). Kodwa ungakhohlwa ukuthi inkampani ekhiqiza umoba, ujamu, umkhiqizo kwesizini. Futhi ngakho Maitre itiye isethi ingase ihlanganise hhayi kuphela izinhlobo ezahlukene amaqabunga. Ibhokisi nenhle kungaba uju soufflé, amakhukhi, marmalades ahlukahlukene kanye sezimoto, izigaxa brown umoba.